EST-Vital Serge: “Miainga amin’ny fototra ny fampandrosoana ny fanatanjahantena” - ewa.mg
News - EST-Vital Serge: “Miainga amin’ny fototra ny fampandrosoana ny fanatanjahantena”
Naneho ny heviny
mahakasika ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny filohan’ny
fikambanana Espoirs sportifs de Tuléar” (EST), i Vital
Serge. Miainga amin’ny fototra, hoy izy,
ny fampandrosoana maharitra ho an’ny fanatanjahantena ary tokony
hisy politika matipaika hahatanterahana izany.
(*): Ahoana ny fahitanao ny fanatanjahantena eto
Vital Serge (-):
Amiko, somary mbola lavitra ezaka ny fampandrosoana ny
fanatanjahantena eto amintsika satria amin’izao fotoana izao, tsy
manana taninketsa isika, tsy manana mpilalao matihanina noho ny tsy
fisian’ny sekoly ho an’ny fanatanjahantena. Mampalahelo ny
mahita ireo mpila ravinahitra marobe mandrafitra ny ekipam-pirenena
malagasy noho ny tsy fisian’ny mpilalao gasy avy eto an-toerana
*Inona ny olana amin’ny
fitantanana ny fanatanjahantena?
-Tsy misy ny “travail de fond” na
ny fijerena ny fototra tena hampivoarana ilay fanatanjahantena.
Marina fa ilaina ny fananganana kianja manara-penitra, saingy ny
fototra no tena tokony himasoana aloha. Tsy fantatra ny tena
filàn’ny mpilalao sy ireo atleta. Raha misy aza ny “travail de
fond”, hatao amin’ny fihatsarambelatsihy sy entina hisehosehoana
fotsiny. Izay ny tena olana amiko.
*Inona ary ny politika
hampivoarana ny fanatanjahantena?
-Mila mifantoka bebe kokoa amin’ny
fototra, ohatra, ny fananganana sekoly ho an’ny fanatanjahantena
isaky ny taranja, isaky ny faritra, toy ny Espoirs sportifs. Raha
hanangana fotodrafitrasa, tokony hasiana kelikely avokoa manerana
ny Nosy. Tsy tokony horefesina amin’ny fananganana kianja
manara-penitra ny fampivoarana ny fanatanjahantena.
*Vonona ve ianao
hiara-hiasa amin’ny mpitantana ny fanatanjahantena eto
-Misokatra amin’ny fiaraha-miasa
amin’ny rehetra aho. Efa nisy fotoana, nangataka tamin’ny
minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena aho, hiara-hiasa
an-tsitrapo tsy karamaina, tamin’ny taona 2018 ary mbola miandry ny
fanapahan-kevitra avy amin’izy ireo. Tsy fantatro raha mbola tsy
tonga any amin’ny tomponandraikitra ny hafatro na niniana tsy
nojerena fa mbola miandry aho, hatreto. Ilaiko ny hanomezan’izy
ireo izay fankatoavana ny fiaraha-miasa aminy izay hahafahako
mitondra ny hetahetako amin’ireo olona afaka hanampy ny
fanatanjahantena malagasy. Raha mitovy ny tanjona amin’ny
fampivoarana ny fanatanjahantena, vonona aho.
L’article EST-Vital Serge: “Miainga amin’ny fototra ny fampandrosoana ny fanatanjahantena” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 29/09/2020
Mpikabary hajan’ny Gasy : “Ho taom-panonerana ity taona ity”
Hosantarina amin’ny fampianarana kabary ny fahenin-taona nijoroan’ny fikambanan’ny mpikabary Hajan’ny Gasy. Hotanterahina ny ny asabotsy 13 febroary izao, manomboka amin’ny 9 ora maraina, ny taom-pikatrohana vaovao ho an’ireo maniry ho lasa mpikabary. Eny amin’ny sekoly Mahaleovasoa Impec ny hanaovana izany, isaky ny asabotsy maraina. Dimy taona katroka tamin’ny taon-dasa teo ny nijoroan’ny fikambanana Hajan’ny Gasy, saingy tsy tanteraka ny hetsika tokony ho nanamarihana ny fankalazana fa voatery tsy maintsy nofoanana noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana nisy teto amin’ny firenena. Tanjo­na, amin’ity taona 2021 ity, ny hamoaka mpikabary matihanina mba tsy ho mena-mitaha amin’ny fikambanana hafa, raha ny nambaran-dRahajasoa Honoré, filoha mpanorina ny fikambanana. Nikatso avokoa ny seho sy ny hetsika zavakanto tamin’iny taon-dasa iny vokatry ny Coronavirus. Ani­san’ny voakasika tamin’iny krizy iny ihany koa ny lafiny fampianarana kabary ka izay tsy vita tamin’ny taon-dasa rehetra, hoezahina atao avokoa amin’ity ahafahana manatratra ny vina efa napetraka, araka ny nambarany hatrany. Hamoaka ny andiany fahadimy amin’ny volana jona izy ireo ary natao hifanindran-dalana amin’ny fankalazana ny iray volan’ny teny malagasy izany lanonana izany. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ny Hajan’ny Gasy mpikabary amin’ny fanandratana ny kolontsaina malagasy, indrindra ny sehatry ny kabary. Manana ny kaonty amin’ny tambajotran-tserasera facebook “Hajan’ny Gasy mpikabary ny tenany ho an’ireo te hifanerasera aminy.NarilalaL’article Mpikabary hajan’ny Gasy : “Ho taom-panonerana ity taona ity” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoatra haingana ny fividianana entana amina tambajotra serasera an’ny DHL aty Afrika (DHL Africa e-commerce), tato anatin’ny fito herinandro. Raha nahomby ny fandehan’ny varotra tamina firenena afrikanina 11, napetraky ny DHL Express indray io karazam-barotra io amin’ny firenena sivy hafa aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika, anisan’izany i Madagasikara, miampy an’i Cameroun, Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Mozambique, Tanzanie, ary Zambie.« Mitombo isa hatrany ny mampiasa io tambajotra io, noho ny fahitanay izay fitombony haingana izay sy ny valiny mahafa-po avy amin’ny mpanjifa, nahatonga anay niditra amin’izao dingana vaovao izao », hoy i Myria Leung Chi Yuen, talen’ny varotra ao amin’ny DHL eto Madagasikara.Nohamafisiny fa tombontsoan’ny mpanjifa malagasy sy vahiny ny fisian’io tambajotra eo amin’ny varotra io. Karazany maro ireo entana azo isafidianana amin’ny tranombarotra maherin’ny 200 any Angletera sy Etazonia, voamarin’ny DHL sy manatitra izany anatin’ny fotoana fohy any amin’izay tompony.Ho tafakatra 50 % ny varotra amin‘ny alalan’ny “e-commerce” aty Afrika mialoha ny taona 2025, amin’ny sokajin’ny mpanjifa antoniny, raha ny fahitana ny fahamaroan’ny finday “smartphones” aty Afrika. Mora ny mampiasa izany ary haingana, tsy manahirana, indrindra vahaolana iray iadiana amin’ny hosoka, raha ny fanazavan’ny DHL Africa. R.Mathieu L’article DHL varotra (e-commerce): maro isafidianana any Angletera sy Etazonia a été récupéré chez Newsmada.
Men – Fanodinkodinam-bola maherin’ny iray miliara Ar: Men – Fanodinkodinam-bola maherin’ny iray miliara Ar: tale sy sefo ary olona efatra hafa naiditra am-ponja
Resaka fanodinkodinam-bola momba “cantine scolaire” indray. Nilatsaka ny didy teo anivon’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) etsy 67 ha ka olona enina, ahitana tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (Men), naiditra am-ponja vonjimaika. Niakatra teny amin’ny Pac, ny 23 desambra teo, ity raharaha nahavoarohirohy olona maherin’ny 20 ity. Nialohavan’ny fanadihadiana nataon’ny eo anivon’ny Bianco ny volana oktobra teo izany, araka ny loharanom-baovao. Tsy afa-bela tamin’izany ary naiditra am-ponja ny tale teo aloha, misahana ny «éducation préscolaire et de l’alphabétisation – Depa» sy ny tompon’andraikitry ny «suivi-évaluation», ny «chef comptable», ny mpitantana teo aloha ny PRMP ary ireo mpamatsy entana miisa roa.Hosoka sy firaisana tsikombakomba… Niseho tany amin’ny taona 2018 ny raharaha ka niahiahiana azy ireo ho nanodinkodina vola hatrany amin’ny 4.820.880 000 Ar hamatsiana legioma ny sakafo an-tsekoly ho an’ny EPP miisa 86 ho an’ny faritra Analamanga sy i Vakinankaratra ary ny any Atsinanana. Niditra an-tsehatra ny mpisafo raharaham-panjakana ka nahatsikaritra fa mitentina hatrany amin’ny 1.277.280 000 Ar ny vola voahodina. Nisy fampiasana ho­soka tamin’ny fanafarana ny entana indroa miantoana tao anatin’izany ka nampidangana ny vola ary anisan’ny nanamora ny famoahana izany ny firaisan-tendro teo amin’ilay tale (Depa) sy ny mpiara-miasa aminy, ny mpanara-maso ny «cantine scolaire».PRMP voasaringotra amin’ny raharaha hafa koa Manampy izany ny «chef comptable» sy ny «dépositaire comptable». Teo koa ny mpitantana teo aloha ny PRMP, efa naiditra am-ponja amin’ny raharaha hafa… Araka izany, andrasana indray ny ho tohin’ny raharaha, indrindra ny fitsarana momba ireo olobe eo anivon’ny Men ireo.Synèse R.L’article Men – Fanodinkodinam-bola maherin’ny iray miliara Ar: Men – Fanodinkodinam-bola maherin’ny iray miliara Ar: tale sy sefo ary olona efatra hafa naiditra am-ponja a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana loholona ao Toamasina: mitarika ny lisitra kandidà MMM Raharinirina Sidonie
Nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny ao amin’ny Ovec faritanin’i Toamasina ny kandidàn’ny antoko Malagasy miara-miainga. Mitarika ny lisitra, Raharinirina Sidonie, avy any Analanjirofo miaraka amin’i Bevoavy Joel sy Fidelis, Atsinanana ary ny Me Zo avy any Alaotra Mangoro. « Akaiky ny ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina ny lohonona. Tsy mandroso i Madagasikara raha misy kaominina iray tsy mandroso. Henonay ny antso vonjinareo olom-boafidy eny ifotony ka vonona izahay hiahy anareo », hoy izy ireo.Mazava kosa ny nambaran’ny filoha nasionalin’ny antoko, Andrianainarivelo Hajo tamin’izany fa efa nifanarahana tamin’ny fitondrana tahaka ny efa natao tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy depiote ny fahafahana mandrotsaka kandidà amin’ny anaran’ny antoko tahaka izao. « Tsy miala amin’ny fitondrana na misy ny tsy fifanarahana fa fandaminana niarahana izao… », hoy izy.Mirotsaha raha mafy…Nohitsiny kosa anefa fa aoka tsy hisy ny faneriterena na koa fandrahonana. Mirotsaha raha mafy be fa aza mifandrahona isika. Tsy ekena raha tahaka izany ny itondrana ny raharaham-pirenena, araka ny nambarany. « Hajao ny safidim-bahoaka amin’ny nofidiny ka omeo haja sy voninanhitra ny vahoaka. Tsy azo ekena velively ny tsindry na avy amin’iza na avy amin’iza… », hoy ihany izy.Synèse R.L’article Fifidianana loholona ao Toamasina: mitarika ny lisitra kandidà MMM Raharinirina Sidonie a été récupéré chez Newsmada.
Firaisamonim-pirenena- LFI 2022: nifehy ny ady sisika momba ny famatsiam-bola ny fahasalamana
Hodinihina eny anivon’ny Antenimierampirenena indray, amin’ity volana oktobra ity, ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LFI) taona 2022 mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana andraisan’ny solombavambahoaka anjara. Anisan’ny manana andraikitra anatin’ny adivehitra koa ny firaisamonim-pirenena misehatra amin’ny fahasalamana. Ahafahana manao ady sisika hampiakarana ny vola atokana ho an’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny LFI 2022, nomena fiofanana manokana nanomboka ny volana mey noho mankaty ny solontenan’ny firaisamonim-pirenena Comaress, Hina, ONG Asos, CCOC. Niompana tamin’ny ady sisika amin’ny famatsiam-bola momba ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-pahasalamana ho an’ny daholobe (CSU) ny fiofanana izay nofaranana tamin’ity herinandro ity, hoy ny filohan’ny ONG Asos sady mpitarika Comaress eto Madagasikara, ny dokotera Rakotomalala Jean Claude teny Ambatoroka.Firenena 12 aty Afrika no miara-miofana taorian’ny fiofanan’ny mpampiofana nokarakarain’ny Impact santé Afrique. Malagasy roa avy amin’ny Asos sy ny HINA ny solontenantsika teto Madagasikara ka izy ireo indray no nampiofana ny firaisamonim-pirenena 23 sy ny solombavambahoaka ao anatin’ny vaomiera fahasalamana avy eo. Eto Madagasikara, mbola ny 7% mahery amin’ny tetibolam-panjakana ihany no atokana ho an’ny fahasalamana raha 15% ny tapaka nandritra ny fifanarahana tany Abuja ka mbola mila ezaka ny ady sisika hahatrarana ny tanjona.Vonjy L’article Firaisamonim-pirenena- LFI 2022: nifehy ny ady sisika momba ny famatsiam-bola ny fahasalamana a été récupéré chez Newsmada.